Nagu saabsan - Qingdao Xinmao ZT Steel Co., Ltd.
Shirkadda Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd. waa shirkad gebi ahaanba iska leh shirkadda Qingyun Xinmao Steel Structure Co., Ltd. oo la aasaasay bishii Juun 2003 iyada oo leh aag warshadeed oo ka badan 50,000 sms. Shirkaddu waxay leedahay 486 shaqaale, 40 injineero, oo ay ku jiraan 12 naqshadeeyayaal, 25 injineernimo xirfadeed iyo shaqaale farsamo.
Shirkadda ayaa silsilad dhameystiran warshadeed ee la talinta injineernimada, qorshaha naqshadaynta, processing-soo-saarka, dhismaha, mashruuca aqbalo. Badeecada hubkaas ayaa loo isticmaalaa in workshops, bakhaarada, saldhigyada, hoolalka bandhig 4s iyo wixii la mid ah. The dhismayaasha dhismeedka alaabta birta iyo guryaha weelka si fiican u helay by macaamiisha gudaha iyo dibadda, ma aha oo kaliya caanka ah qoyska, iyo dhoofiyo Bangladesh, Indonesia, Israa'iil, Nigeria, Sri Lanka, Philippines, Mozambique iyo dalal kale iyo gobollada.
Iyadoo la shuruudaha heer wax soo saarka, shirkadda soo bandhigay khadadka-soo-saarka sare, waayo si joogto ah hal-abuurka iyo horumarinta wax soo saarka. Currently waxaan leenahay ka badan 10 khadadka-soo-saarka, sida olol CNC jarida line-soo-saarka, C-section line-soo-saarka steel, koox ku jirase aad H-section, albaabka arc biyaha hoostooda alxanka line-soo-saarka, line-soo-saarka saxan Sandiwiij, sita line-soo-saarka Plate iwm
Waxaan u hoggaansamaan xirfadlaydu, alaabta, wax soo saarka qiyaasta ay cadahay hordhaca ah ee teknoolajiyada cusub. "Tayada heer sare mashruuca, adeegga macaamiisha maskax iyo dhaafin" noo noqonaysaan Ujeedada. Waxaan rajaynaynaa in aan dhisno mustaqbal wanaagsan leh macaamiisha.